नेपालमा जलवायु परिवर्तन र कोरोनाभाइरसको सम्बन्ध - News from Nepal
मौसम (Weather): कुनै सानो भू–भागले वा स्थानको वायमुण्डलमा छिनछिन वा दैनिक रुपमा रहको वातावरणीय अवस्थालार्ई नै मौसम भनिन्छ । मौसमकोे सुचकको रुपमा दैिनक तापक्रम, सूर्यदय, वायु (हावा) को गति, वर्षातलाई लिने गरिन्छ । सानो भूगोल वा मौसममा छिनछिन वा दैनिक रुपमा हुने परिवर्तनलाई मौसम परिवर्तन भनिन्छ ।
जलवायु (Climate): छाटेकरीमा जलवायुलार्ई सामान्यतया मौसमको आसैतका रुपमा लिने गरिन्छ । गहन रुपमा भन्नु पर्दा केही वर्षको तापक्रम, वर्षा, हावाको गति आदि जस्ता मौसमी तथ्याङ्क विवरणहरुको आधारमा निकालिएको औसत तथा भिन्नता (Variability) को परिमाण नै जलवायु हो । विगत ३० वर्ष देखिको औसतमा आएको परिवर्तनलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ ।
के कारणहरुले हुन्छ जलवायु परिवर्तन ?
जलवायु परिवर्तनमा मानिसको भूमिका महत्वपुर्ण रहेको छ । मानिसहरुले आफ्ना दैनिक कार्यहरु सञ्चालन गर्नका लागि उद्योगहरु प्रसस्त मात्रामा खोलेको पाईन्छ साथै बनजङ्गलको विनास पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा वायुमण्डलमा हरितगृह ग्याँस (Green House Gases- GHGs) ग्यास कार्वन डाइअक्साइड (CO2), मिथेन (CH4), नाइट्रस अक्साइड (N2O), हाइड्रोफ्लोरोकार्वन (HFCs), परफ्लोरोकार्वन (PFCs), सल्फर हेक्जाफ्लोराइड (SF6) गरी ६ किसिमका ग्याँसहरुको मात्रामा बृद्धि भइ वायुमण्डलमा असर पारेको कारण पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनका संकेतहरु देखा परेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको असरहरु के के हुन ?
जलवायु परिवर्तनका कारण मानवीय जीवनमा धेरै असरहरु देखा परेका छ । मानिसहरु ३० वर्ष पहिला देखेको वातावरण अहिले देख्न छाडेका छन् । नेपालमा कैयौ वनस्पतीहरु र जनावरहरु लोप भईसकेको छ भने नया ठाउँमा नया नया खालका प्रजातीहरुको बाहुल्यता बढेको छ । पानी पर्ने समयमा पानी नपर्ने र गर्मी बढ्ने समय चैत बैसाखमा पनि हिमपात भईरहेको देख्न सकिन्छ । हावाको बहावमा पनि घटबढ भएको छ । नया तालहरु बन्ने र फुट्ने खतरा बढेको छ । वर्षाको अवधि र मात्रामा घटबढ भएको छ । नेपालको उत्तरी भेगमा हिमपातको असर देखा परी मानविय जीवन कष्टप्रद भएको छ । कुनै ठाउँमा पानीका मुहान सुक्ने ,वाढि तथा पहिरोले धनजनको क्षति गराउने, वालीनालीको उत्पादनमा ह्रास हुने, वाली पाक्न र रुखविरुवाको फुल फुल्ने समयमा परिवर्तन किरा तथा जनावारको वासस्थान परिवर्तन (माथिल्लो उचाईमा पनि लामखुट्टे प्रशस्त पाउनु) र चैत बैसाखको समयमा पनि अत्यधिक चिसो र दिनहुँजस्तो पानी पर्ने भएको छ । जसले गर्दा मानविय जीवनयापन गर्न समस्या पैदा गराएको छ ।
कोरोनाभाइरस र नेपालको मौसम परिवर्तन
नेपालमा पछिल्लो दिनहरुमा दिनहुँ जस्तो गर्मीयाम बढ्ने समयमा पनि चिसो बढ्दै जादा चिनको वुहान प्रान्तबाट फैलिएको कोरोनाभाइरस फैलनको लागि थप मलजल गरेको देखिन्छ । जुन भाइरस फैलनको लागि नेपालमा जलवायु परिवर्तन एक कारकको रुपमा आउने देखिन्छ । विकसित मुलुक चीनमा त यो भाइरसले विपदको रुप लियो भने नेपाल जस्तो मुलुकमा यो भाइरस फैलनु नेपालीहरुका लागि थेग्न नसकिने समस्याको रुपमा आउनेछ । डाक्टरहरुको भनाईमा यो भाइरस ३० डिग्री तापक्रममा मर्ने भनिएतापनि नेपालको मौसममा यस्तो खालको अवस्था आउन सकेको छैन । जुन फरक फरक मौसमको कारण समस्याको रुपमा आउन सक्छ । कोरोनानामक भाइरस चिसो अवस्थामा छिटो फैलने भएकोले मौसममा कस्तो परिवर्तन आउँछ त्यस अनुरुप नै यस भाइरसको विकास र न्युनिकरमा पनि मौसमले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा प्राकृतिक विपदहरु त हामीले धेरै देखेका छौ । त्यस सगसँगै नया नया खालको रोगहरु पनि एकपछि अर्को गर्दै हाम्रो समाजमा देखिनुले जलवायुको भूमिका प्रस्ट देख्न सकिन्छ । यस तर्फ हामी प्राकृतिक विपक्ति सँग लड्नु भन्दा अनुकुलनको उपायहरु सोच्नु , कोेरोनाभाइरसको जोखिमबाट बच्न सक्ने उपायहरुको खोजि गर्नु राम्रो हुनेछ ।